जनगणना आउटरीच अभियानबाट अन्तरदृष्टि
Tomás Quiñonez मा सेप्टेम्बर 3, 2020 द्वारा लिखित।
आप्रवासीहरू, अन्य सीमान्तकृत समुदायहरू जस्तै संयुक्त राज्य जनगणना ब्यूरोले "गन-गन्ती" को रूपमा लेबल लगाएको छ। प्रभाव यो हो कि आप्रवासीहरू कुनै तरिकामा जानकारीको अभाव वा रुचिमा अभावमा छन्। हाम्रो काम अन्यथा भन्छ.
यस वसन्त, MAF एक विचारशील, लक्षित जनगणना आउटरीच अभियान को नेतृत्व। भावनात्मक संलग्नता, सांस्कृतिक रूपमा सान्दर्भिक मेसेजिंग र विश्वासको आधारमा निर्माण गरेर जुन हामीले सेवा गर्ने ग्राहकहरूसँग गैर-नाफा-मुनाफा जडान गर्दछ, MAF सुई सारियो। जनगणना ब्यूरोले २०२० जनगणनाको लागि 1०१TP१ टी प्रतिक्रिया दर अनुमान गर्‍यो जुन दशकहरूमा सब भन्दा कम हो। हाम्रो हप्ता लामो, डिजिटल-प्रथम आउटरीच अभियान पछि, हामीले MAF ग्राहकहरूले त्यो नम्बर 83 83१TP१ टीसम्म ल्याएको देख्यौं। यो आप्रवासी ग्राहकहरु द्वारा धेरै भागमा संचालित गरिएको थियो जो अधिक व्यस्त हुन सकिए, एसएमएस आउटरीचलाई 54 54१TP1 टी को अविश्वसनीय दरमा जवाफ दिए, उद्योग मानक भन्दा दुई गुणा बढी। आप्रवासीहरू, हामीले पत्ता लगायौं, वास्तवमा गणना गर्न सजिलो थियो।
जनगणनामा सीमान्तकृत समुदायको आवाज उठाउन कडा स fighting्घर्ष गरिरहेका स organizations्गठनहरूको फराकिलो गठबन्धनको कामका बारे जानकारी दिन हामी यस अन्तर्दृष्टिलाई प्रस्ताव गर्दछौं। एमएएफको विश्वास छ कि यस प्रयासमा नाफामुखीको अनुपम भूमिका समयको साथ खेती गरिएको विश्वासको सम्बन्धमा जडित छ। आजको गलत सूचना युद्धको कुहिरोमा प्रकाशको प्रकाशको रूपमा, गैर मुनाफाहरू महत्त्वपूर्ण र भरपर्दो जानकारीको महत्वपूर्ण सन्देशवाहक हो।
सेप्टेम्बर th० को म्याद अगाडि समय सकिँदैछ त्यसैले हामीले MAF नेटवर्कमा र बाहिरका पार्टनरहरूको आवश्यक र आलोचनात्मक प्रयासहरू सूचित गर्न क्रियात्मक अन्तरदृष्टि कम्पाइल गरेका छौं। यसपछि हाम्रो जनगणना अभियानको कहानी हो, हामीले के गरेका थियौं र हामीले सिकेका पाठहरू। हामी आशा गर्दछौं कि तपाईले यी शिक्षालाई उपयोगी भएको पाउनुहुनेछ, त्यसलाई आफ्नै काममा लागू गर्नुहोस्, र हामी आफैंले सामेल हुनुहुनेछ जस्तो लाग्छ हामीले दिनदिनै सेवा गर्ने अविश्वसनीय व्यक्तिको आवाज माथि उठाउने क्रममा।
MAF हाम्रो ग्राहकहरु को जीवित अनुभव संग शुरू हुन्छ।
जनगणना फैलाउने अभियानको सन्दर्भमा, हामीले प्रयोग गरेको सन्देश प्रवाह दुबै समयमा र प्रासंगिक हुनुपर्‍यो। यो द्रुत रूपमा स्पष्ट भयो, यद्यपि मानक सन्देश जनगणना ब्यूरोबाट पनि थिएन। जनगणना ब्यूरोबाट हामीले पत्ता लगाएका दुई सबैभन्दा सामान्य सन्देशहरूले शक्ति (कression्ग्रेसनल प्रतिनिधित्व) वा पैसा (संघीय बजेट विनियोजन) को हिसाबले जनगणनाको महत्त्व वर्णन गरे। ती व्यक्तिहरूलाई जुन पहिले भनिन्छ कि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा उनीहरूको पहिलो स्थान हुँदैन, र जसलाई नियमित रूपमा सामाजिक सेवाहरू निषेध गरिन्छ, यी बुँदाहरू उत्तम रूपमा अर्थहीन वा सबैभन्दा खराब, अपमानजनक हुन्छन्।
हाम्रो ग्राहकहरूको जीवनको लागि हाम्रो धनी समझको आधारमा, हामी जान्दछौं कि सन्देश सुधार गर्नु सरल हुनेछ। कुञ्जी भावनात्मक संलग्न र सांस्कृतिक रूपमा प्रासंगिक भाषा सम्बन्धित र समुदायको थिमहरूमा केन्द्रित शिल्प थियो।
हाम्रो अन्तर्ज्ञान जाँच गर्नका लागि, हामीले एउटा घर निर्माण गरेका २ सन्देश बिरूद्ध २ मानक जनगणना सन्देशहरूको नतिजा तुलना गर्न अभियान डिजाइन गर्यौं। अर्को नाफा नकमाउने, आप्रवासी वकालत संगठन वन अमेरिका, हाम्रो अभियानमा सामेल हुनुभयो। सँगै, हामी यी सन्देशहरू ,,२०० ग्राहकहरू लाई अंग्रेजी र स्पेनिश बोल्ने समुदायहरूमा ईमेल र एसएमएसको संयोजन प्रयोग गरेर बुझ्यौं।
परिणामहरू आए: हाम्रो अभियानमा एकल सबैभन्दा प्रभावकारी मेसेजिंग कोण शक्ति वा पैसा थिएन, तर सम्बन्धित थियो।
यस नतीजाले स accepted्केत गर्दछ कि वास्तवमा स्वीकार गरिएको अनुभवलाई माथि उठाउनको लागि सन्देशन शक्तिशाली छ। हुनसक्छ यसको कारण यो प्रभावशाली राष्ट्रिय वार्ताको विपरीत हो जुन मानवतालाई सक्रिय रूपमा इन्कार गर्दछ र आप्रवासी समुदायहरूको वैधतालाई अमेरिकी जीवनमा पूर्ण सहभागीको रूपमा अस्वीकार गर्दछ। एक संगठनको रूपमा, एमएएफ कहिल्यै पछि हटेको छैन पछाडि धकेल्दै प्रमुख प्रवचनमा र यस अभियानको नतीजाले किन प्रदर्शन गर्दछ।
एम.ए.एफ. मा क्राफ्ट मेसेजि To्ग गर्नु भनेको केवल जानकारी फैलाउने कुरा मात्र होइन, आत्मासँग बोल्ने प्रयास हो। हामीले सन्देश राख्यौं कि सन्देशले हाम्रो ग्राहकहरूको मूल कुरा गर्नुपर्नेछ किनकि हामीले गर्ने सबै थोक, नयाँ सेवाहरूको घोषणादेखि हाम्रो ग्राहकहरू जटिल, अद्वितीय मानवहरू हुन् जुन यस धारणाबाट सुरू हुन्छ जुन डाटा पोइन्ट भन्दा कहिल्यै टाढाको कुरा हो। जब हामी सन्देश पठाउँदैछौं जुन हाम्रो ग्राहकहरूको बस्ने, भावनात्मक अनुभवहरू बोल्छ, हामी उनीहरूको दिमागमा पुग्छौं, दिमागमा होइन। अभियानका परिणामहरूले देखाउँछन् कि यो सफलताको लागि आधारभूत रणनीति हो।
एसएमएस संचारको सबैभन्दा प्रभावकारी विधि थियो, विशेष गरी ग्राहकलाई जो स्पेनिश बोल्छन्।
अभियानको दोस्रो अन्तरदृष्टि विधीहरू वरिपरि थियो। ग्राहकहरू जसले अ preferred्ग्रेजीलाई उनीहरूको मनपर्ने भाषाको रूपमा चयन गर्थे उनीहरूले ईमेलमा जवाफ दिने सम्भावित बढी थियो जो स्पेनिशलाई रुचाउँथे। एसएमएस को लागी, उल्टो सही थियो। अ -्ग्रेजी भाषा बोल्ने ग्राहकहरूले 11११ टीटी १ टीको दरमा जवाफ दिए जबकि स्पेनिश भाषा बोल्ने ग्राहकहरूले हाम्रो एसएमएसलाई जवाफ दिएर st२१ टीटी १ टीमा चकित भए।
यी परिणामहरूले स्पेनी भाषा बोल्ने समुदायहरू पुग्न गाह्रो वा "गणना गर्न गाह्रो" भन्ने प्रचलित कथनलाई पछाडि धकेल्छ। हामीले भेट्टाएकै विपरित थियो। सहि सन्देशको साथ र सहि माध्यमको माध्यमबाट लक्षित गरी, स्प्यानिश भाषा बोल्ने ग्राहकहरू अस्वीकृतबाट टाढा छन्, तर वास्तवमै सबैभन्दा व्यस्त। जिम्मेवारी, त्यसोभए, आउटरीच म्यानेजरहरूको हो कि उनीहरू आफ्नो अभियानहरूलाई यी अन्तर्दृष्टिहरूको साथ सूचित गर्नका लागि उनीहरूका समुदायहरूलाई उनीहरू प्रभावकारी रूपमा भेटिरहेका छन्।
यी परिणामहरू हातमा लिएर, हामीले उनीहरूको नागरिक संलग्नता रणनीतिहरूको बारेमा अन्य गैर-नाफामुखी मानिसहरूसँग कुरा गर्न थाल्यौं।
हामीले बोर्डमा के फेला पारे त्यो नागरिक कार्यको महत्त्वको साझा साझेदारी थियो। यद्यपि ओभरवर्क र अण्डफन्ड फन्ड भएका संगठनहरूका लागि बहु-च्यानल अभियानहरू चलाउन कुनै अधिक क्षमता थिएन किनकि विशेष गरी एसएमएस उपकरणहरू या त महँगो थिए वा प्रबन्ध गर्नका लागि समय-उपभोक्ता थिए। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, बजारमा अवस्थित उपकरणहरू नाफा-रहितको लागि निर्माण गरिएको थिएन।
हामीले त्यसलाई परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्यौं। सफ्टवेयर स्टुडियोमा टेक्नोलोजिस्टहरूको उच्च कुशल टीमसँग साझेदारीमा सुपर सेट}, हामीले हाम्रो आफ्नै डिजिटल उपकरण निर्माण गर्‍यौं जुन गैर-नाफामुखी संस्थाहरूलाई उनीहरूको समुदायहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सजिलो बनाउँदछ। नतिजा उल्लेखनीय थियो।
3,२०० ग्राहकहरूको लागि हाम्रो step-चरण अभियानले प्रभावशाली 1 36१TP1 टी प्रतिक्रिया दरमा डोर्‍याउँछ, र हाम्रो अनुमानले, यसलाई योग्य छ कि समुदायहरूको लागि १ लाख २ लाख funding० लाख सुरक्षित गर्‍यो। सबै एक हप्ता भित्र र एक कर्मचारी सदस्य द्वारा प्रबन्धित। हामीले निर्मित टेक्नोलोजीले गैर-नाफामुखीहरूलाई पूर्ण-समय अभियान प्रबन्धक वा बैंकलाई तोडे बिना प्रभावकारी अभियानहरूको नेतृत्व गर्न सक्छ
साझेदारहरूलाई एमएएफको निमन्त्रणा
अन्य गैर-नाफामुखीको साथ प्रारम्भिक कुराकानीमा, हामीले पत्ता लगायौं कि अधिकतरहरू उनीहरूको जनगणना अभियानहरूको लागि व्यक्तिगत आउटरीचमा 80-90% भरोसा गर्दै थिए। COVID को सुरूवातसँगै, ती योजनाहरू सन्झ्याल बाहिर गए। अब जब कि व्हाइट हाउसले जनगणनाको टाइमलाइनको एक अनमोल महिना काट्यो, घडी टिक्दै छ।
एमएएफले हाम्रो परीक्षण गरिएको मेसेजि and र विकसित टेक्नोलोजीको उपयोग गरेर जनगणना आउटरीच प्रयासहरूको मापन गरी देखाईरहेको छ। द ग्रोव फाउन्डेशनको समर्थनका साथ हामी यो सुनिश्चित गर्न अन्तिम पुल बनाइरहेका छौं कि एमएएफ नेटवर्कमा सबै मेहनती क्लाइन्टहरू गन्ती गरिए, हेरिरहेका छन् र उनीहरू योग्य संसाधनहरू प्राप्त गर्दछन्।
यस गतिमा निर्माण गर्दै, हामी जनगणना कार्यबाट प्राप्त अन्तरदृष्टिद्वारा सूचित गेट आउट आउट भोट (GOTV) अभियानको योजना गरिरहेका छौं। एमएएफको परिचालन प्रयासहरूको विकासलाई निरन्तरता दिनको लागि आवश्यक कदम हो किनभने हामी हाम्रो जीवनको सबैभन्दा ऐतिहासिक चुनावलाई स्टार्ट गर्दैछौं। यो क्षणले सबैलाई बोलाउँदैछ, माथि जान, हाम्रा मानक साइलो माथि मुक्का र हामी सेवा गर्ने समुदायहरूको आवाज माथि उठाउन।
यदि तपाईं पाठ्यक्रम साझा गर्ने र हाम्रो नयाँ बीकन प्लेटफर्मको भविष्य आकार दिन साझेदारहरूको बढ्दो समुदायमा सामेल हुन चाहनुहुन्छ भने, कृपया हामीलाई ईमेल गर्नुहोस्। हाम्रो लक्ष्य भनेको यो सुनिश्चित गर्नु हो कि एक गैर मुनाफा द्वारा बनेको टेक्नोलोजी समयमै र अन्य गैर-नाफाको लागि प्रासंगिक रहन्छ। तपाईं नागरिक कार्यमा MAF को फोकसको बारेमा बढी सिक्न सक्नुहुनेछ यो सीईओ, जोसे क्युओनेज र गतिशीलता निर्देशक, जोआना कोर्टेज बीच वार्तालाप।
PS हामी तपाइँको पाठ लिन हाम्रो साथमा तपाइँलाई छोड्नेछौं ईतिहास, यो गल्ती दोहोर्याइएको छैन सुनिश्चित गर्न।
पहिले तिनीहरू आप्रवासीहरूका लागि आएका थिए
र मैले बोल्ने छनौट गरे
किनकि हामी परिवार हो
तब तिनीहरू गरीबहरूको लागि आए
त्यसोभए तिनीहरू मेरो लागि आए
र अरू पनि थिए